Mmelite iWork iji nyere ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ aka | Esi m mac
Mmelite iWork iji nyere ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ aka
Toni Cortes | 02/06/2021 14:00 | Mmemme Mac
Apple na-arụ ọrụ ruo ogologo oge na-eche echiche banyere otu ngwaọrụ ya nwere ike isi baa uru karịa ndị na-emepụta ihe y ndị nkuzi. Ọ maara na ọ bụrụ na nwa akwụkwọ amụrụ ihe na gburugburu Apple, ọ ga-enwe onye ọrụ ga-eme n'ọdịnihu.
Companylọ ọrụ ahụ kwenyere ya, ka oge na-aga, ọ na-eme ihe iji nyere ụlọ akwụkwọ na mahadum aka iji ngwa Apple rụọ ọrụ ọ bụla o kwere mee, ma ọ bụ Macs ma ọ bụ iPads. Suite Ana m arụ ọrụ gbakwunyere ihe ohuru iji mee ka odiri ndi nkuzi na umu akwukwo mfe isoro Peeji, Onu Ogugu, na Isi Okwu.
Apple na-ewepụta mmelite na ngwa ụlọ ọrụ iWork nke ụlọ ọrụ ha, na-eweta atụmatụ ọhụrụ peeji nke, Ọnụ Ọgụgụ y keynote. Mmelite ahụ na-eweta mwepụta ọhụrụ na ngwa ngwa Schoolwork nke Apple, atụmatụ ọhụrụ na Ọnụ Ọgụgụ, na atụmatụ ọhụrụ ndị ọzọ pụtara ìhè.
Ihe ọhụrụ ndị a nke ngwa atọ dị na 11.1 mbipute maka macOS, iPadOS na iOS. Ka anyị lee ha:
1 peeji nke
3 Ọnụ Ọgụgụ
Ugbu a ị nwere ike ịmepụta njikọ na ibe weebụ, adreesị ozi-e na akara ekwentị na ihe dị ka ụdị, ahịrị, ihe oyiyi, eserese, ma ọ bụ igbe ederede.
Ndị nkuzi na-eji ngwa ihe omume ụlọ akwụkwọ ekenye ndị mmadụ ọrụ na Peeji nwere ike ịhụ ọhụhụ nwata akwụkwọ ugbu a, gụnyere ịgụ okwu na oge ejiri (naanị iPad na iPhone).
Ndị nkuzi jiri ngwa ihe omume ụlọ akwụkwọ na-ekenye ndị mmadụ Ihe Nlere nwere ike ịhụ ugbu a nwata akwukwo oganihu, gụnyere ịgụ okwu na oge ejiri.
Dị ka ọ dị na Peeji, ị nwere ike mepụta njikọ ugbu a na ibe weebụ, adreesị ozi-e, na akara ekwentị n’ime ihe dịka ọdịdị, ahịrị, onyonyo, eserese, ma ọ bụ igbe ederede.
Ndị nkuzi jiri ngwa ihe omume ụlọ akwụkwọ na-ekenye ndị mmadụ ọrụ na ọnụọgụgụ nwere ike ịhụ ọganihu ụmụ akwụkwọ ugbu a, gụnyere ịgụ okwu na oge ejiri (naanị iPad na iPhone).
Nkwado maka ịmekọrịta na ụdị dị na nnabata (iPad na iPhone naanị).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mmelite iWork iji nyere ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ aka
Lee Anya na Apple Maps rutere ụfọdụ obodo ndị dị na Europe
Ọwa YouTube nke Apple abanyelarị njikere maka WWDC 2021